Ururka shabaab oo sheegay in ay weerar ku qaadeen safarkii Madaxweynaha iyo dowladda oo beenisay – Radio Daljir
Seteembar 3, 2013 7:41 b 0
Marka, September 3, 2013 – Wakaalada wararka ee AFP ayaa shaacisay in kooxda Al-shabaab ay weerar culus ku qaaday kolonyo gaadiid ah oo qeyb ka ahaa safarka Madaxweynaha Soomaaliya, xili uu manata safar dhulka ah ku tegey degmada Marko ee xaruunta shabeelaha hoose.
Sheikh Cabdicasiis Abu Muscab Afhayeenka dhinaca howgallada ee kooxda Al-shabaab oo la hadlay wakaalada wararka ee AFP ayaa sheegay in ay weerarkaas qaadeen barqadii maanta, wuxuu sheegay in ay weerarka ku dileen Askar isugu jira AMISOM iyo kuwa dowladda.
Wuxuu intaas ku daray Afhayeenku in weerarka ay la beegsadeen baabuurta uu la socday madaxweynaha Soomaaliya, dagaalka ayaa ka dhacay deegaanka Buufow oo ku dhow Marka sida ay hadalka u dhigeen, waxayna ururka shaaciyeen in ay gubbeen labba baabuur ka mid ah kuwa la socday safarka Madaxweynaha.
Docda kale Afhayeenka Madaxtooyada Soomaaliya Eng. Cabdiraxmaan Yariisow oo isna jooga degmada Marka ayaa beeniyey in uu dhacay weerar lagu qaaday safarka madaxweynaha intii uu socday, wuxuu sheegay in ay haatan ku sugan yihiin Marka.
Eng. Yariisow wuxuu sheegay intii lagu jiray safarka in uu rogmaday mid ka mid ah gaadiidka ay la socdeen saraakiisha ciidanka dowladda Soomaaliya, wuxuu xaqiijiyey in shilkaas ku dhintay hal Askari dhowr kalena ay ku dhaawacmeen, balse wuxuu ku cel celiyey in ay wararka Al-shabaab yihiin kuwa been abuur ah.
Wasiiro ka tirsan dowladda dhexe, Xilibaano, iyo saraakiil ciidan ayaa safarka qeyb ka ahaa, waxayna haatan joogaan degmada Marka oo ay kulamo kula leeyihiin qeybaha kala duwan ee bulshada magaaladaas, Madaxtooyadu waxay shaacisay in safarka madaxweynaha loogu kuur gelayo xaalada gobolka oo idil.